Iwe unofarira here kuva nemuurayi uyo uyo munhu wese anovhara? Kunyange zvazvo uchidya zvakanaka uye uchienda kumitambo inogona kunge isina kukwana, kutora steroid anabolic zvechokwadi inowedzera kubudirira kupfuura iwe wakambofunga. Nhasi ndiri kuenda kukuudza pamusoro Nandrolone Decanoate, Deca Durabolin cycle, Nandrolone Decanoate muyero, Nandrolone Decanoate anoshandisa, Nandrolone Decanoate mhinduro uye nezvose zvakakosha pamusoro pechirwere ichi chikuru. Iwe hauchazofaniri kubvunza 'mukomana mukuru' pane yako yekurovedza zvaanoshandisa; takuwana iwe.
Tiri buyaas.com, nzvimbo yepaIndaneti uko iwe unogona kutenga Nandrolone Decanoate online. Kuva musangano weChinese unonyanya kukosha mukugadzira, kutengesa, uye kuparadzirwa kwevanabolic steroid, haungambofaniri kushamisika kuti buy Nandrolone Decanoate. Kwete chete isu tinokuvimbisa iwe zvigaro zvakanakisisa asi hutano hwezvigadzirwa zvedu hauna kutendeseka. Chii chinoita kuti tive pachena?
Kubudirira kwekambani yedu kunofanirwa kunhu hwevashandi vanotishandira isu. Paunenge uchisarudza vashandi vakanakisisa kuti vashande kwatiri, tinoenda kune vakachenjera pane dzose dzavo. Sezvo buyaas.com tinova nechokwadi chokuti tinosimudza kubudirira kwavo nekuvapa ivo vane ruzivo rwakanaka. Uyewo, tinovadzidzisa nguva dzekudzidzisa nguva dzose uye zvigadzirwa zvakakwana zvekutaurirana kuita kuti zvinetso zvavo zvizivikanwe. Zvose izvi zvinowedzera kubudirira kwavo uye tsika.
Tinopa zvinhu zvepamusoro-soro izvo iwe unogona kuvimba nazvo. Kana watanga kutora steroid yedu, mikana ndeyokuti iwe uchacherechedza zvido zvaunoda munguva shoma. Uyezve, tinokuvimbisa kuti ivo vakachena uye, naizvozvo, vachashumira chinangwa. Kufungisisa kuti tinoita sei izvi? Isu tinoshandisa zvakanakisisa zvigadzirwa zvemhizha mubhizimusi. Zvimwe pane izvozvo, tinoita maererano nemitemo yakatarwa uye mitemo kuti tive nechokwadi chokuti hutano hwako huri pa check.
Kuti tive nehutano hwakapoteredza, tinoedza kuratidza kuti nzvimbo yakachena yakachena. Zvose zvatinoita hazviti doro remhepo nokuti tinonzwisisa kukosha kwayo mukuchengetedza bhizinesi rakabudirira. Kutarisira kwevatengi vedu kune unhu hwepamusoro hwekuteerera uye inoita kuti vese vatengi vawane mhinduro yakarurama panguva yakakodzera. Icho Chinyorwa Chekupedzisira kuna Dianabol yekugadzirisa muviri
Izvo zvose izvi zvinongova rutivi rwechando; taura nesu nhasi kuti tive nezvakawanda.
Chii chinonzi Nandrolone Decanoate(DECA)?
Pasinei nokuti iwe unyanzvi hwekugadzira muviri kana unyanzvi, iwe wakambonzwa nezve steroid. Icho chimiro chekuvaka muviri chinowedzera simba rako uye simba uye kukubatsira kuti uite zvido zvako zvaunoda. Dzimwe nguva iwe unganzwa sokuti muviri wako wakasvika kumugumo asi kuva nekodzero dzekubatsira kunogona kukubatsira zvakawanda. Asi ndeipi steroid yakakodzera kwauri? Iwe unofanirwa kuongorora mitezo yemigumisiro zvichienderana nemabatsiro ekutora kuti sutu imwe ipi iwe yakanakisisa. Nandrolone Decanoate (DECA) ichakubatsira iwe kusvika pamigariro yako yemuviri pasina kupa zvibayiro pane utano hwako.
Deca Durabolin (360-70-3) nderimwe remazita anozivikanwa zvikuru eNandrolone. Iyo inozivikanwa zvakare se DECA nevaya vanoda mafomu mafupi. Simba rayo guru rakaita kuti rive-anabolic steroid kune vavatambi, varwi vemakwikwi, uye varimi vemunyika munyika nhasi. Deca Durabolin is steroid anabolic inobva paNandrolone hormone inowanzoberekwa mumuviri. Zvisinei, huwandu hwayo hunowanikwa mumuviri kana uchienzaniswa nemamwe mahomoni akaita sa Testosterone. Basa guru reNandrolone kukura uye kubudirira mukati memuviri womunhu. Somugumisiro, zvinobatsira pakurapa maitiro akaoma eAnemia.
Kana ukatora Deca Durabolin, unowedzera huwandu hweSteroid Nandrolone mumutumbi wemuviri. Nemhaka yeizvi, pane kuwedzera kukuru mumatumbu emasumbu, muitrogen retention, red red cell count uye yakawanda ye hemoglobin. Izvo zvose izvi zvinotora nzira yakareba mukubatsira mumasumbu ekukura nekukura patsva.
Nandrolone Decanoate (360-70-3) anoita izvo zvisiri imwe steroid inoita. The Nandrolone Decanoate powder kana kujowa inorohwa kana kutorwa kamwe chete muvhiki asi inogara muhurongwa kwenguva yakareba. Ichi ndechokuti iri steroid inononoka-kubudisa. Ichokwadi chokuti chikamu chiduku chazvo chinoramba chichishanda mumuviri kwenguva yakareba chinoita kuti zvive zvakakwana kune avo vatsva munyika ye steroids. Kubva pakuwanikwa kwacho munguva yekupedzisira ye1950s uye yekutanga 1960s, ani zvake aine chinangwa chekukomberedza angazoenda kuNandrolone Decanoate. Pamwe chete na Dianabol uye Testosterone, inogadzira mutsva unofadza wekugadzirisa misi uye kukura. Testosterone Cypionate: Zvose Muviri Wekufanirwa Kuziva
Icho chemakemikanana yakafanana neTesttosterone chete kuti kune musiyano mutsva mu 19th atomu. Inogona kunge isingaoneki sehope huru, asi ndiyo inoisanidza kubva kune vamwe vanabolic steroids pamusoro pemigumisiro yaro. Kunyange zvazvo yakaitwa steroid munyoro, inopedza kupfuura zvinotarisirwa nomunhu wose. Vanhu vazhinji vanovhiringidza pamusoro pekukwanisa kwayo kupisa mafuta, kuwedzerwa musimba kukura, kuwedzera simba remagetsi, kuwedzera kuwedzera kwehutano uye simba mumuviri.
Mamwe mazita ekutengeserana kwema deca ndeaya;
Nandrodex 300 naSciroxx
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) Mashandiro
Bodybuilding- Mishonga inonyanya kufungidzirwa nevatambi, mizimba, uye ani zvake anofarira kuva nemuviri wakakwana nokuti ndiyo inoshanda uye yakachengeteka anabolic steroid. Izvo zvinoita kuti zvive zvakakurumbira zvikuru pakati pevakadzi vakadzi vomuviri ndezvokuti zviri nyore uye androgenic. Uyewo, inokubatsira kuti uite kuti uone kutarisa kwakaoma kusinganzwisisi nyore. Chimwe chezvinhu zvayo zvinoita kuti ive steroid inofarira ndeyokuti haifaniri kutungamira nguva dzose seyimwe steroid kana ichitora chikamu mumhepo.
Sezvo steroid iyi inogona kukurudzira musimba wemuviri wako kukura uye kuvandudza mukushanda uye kutsungirira, zvakanaka kuti uone kuti unofanira kudzidzisa zvakaoma uye kuva nekudya kwakasimba. Hapana chinhu chinouya patafura yesirivha uye kuti uwane mukana wekukwikwidza iwe unofanirwa kudzidzira mune zvekurovedza muviri kana nzvimbo yako yakanakisisa apo uri steroid iyi. Nandrolone Decanoate inoba iyo kuratidza kana ichiuya pakudzidzisa zvakawanda pasina kutambura kuneta panguva imwechete iyo inowedzera musimba wemaviri.
Osteoporosis- Kukonzera uye kuderera kwemapfupa ndizvo zvinonzi osteoporosis. Chirwere chacho chinoratidzirwa nemapfupa achivhuna nyore nyore uye kuva akaoma zvikuru kunyanya mapfupa ari muchiuno, musana uye chiuno. Pasinei nevanhu vakawanda vanotambura nechirwere ichi, vazhinji vangasaziva kuti vanezvo kusvikira vasveta pfupa. Zvinokonzera zvinokonzera kuderedzwa kwemafupa, kuva amai veAsia kana vachena, kutora mimwe mishonga, nhoroondo yemhuri mu osteoporosis, kuva shoma uye duku uye kukura. Kana isina kusiyiwa inowedzera dambudziko remusana uye fractures. Chinhu chakanaka ndecheNandrolone Decanoatehas yakaratidza kuti inotarisira sezvo inowedzera hutema hwepfupa zvakanaka. Izvozvo, saka, zvinoderedza kushanda kwechirwere pamuviri.
Anemia- Kukundikana kwomuviri wako kutakura oksijeni yakakwana kumativi akasiyana emumuviri wako kunonziwo anemia. Chimwe cheNandrolone Decanoate usesis icho chinokurudzira kushandiswa kwemasero eropa kuitira kuti zvibvumirwe kutakura okisijeni kumuviri wose. Kana iwe uri kutambura pane chero chipi zvacho chezviratidzo zvinotevera iwe unofanira kuona chiremba kuti uone kana chirwere chako kubva pane chirwere chekushaya ropa. Vari; mirpitations, zviratidzo zvekushaya simba pamwoyo, kuputika kwemakumbo, kuputika kwepfupa, ganda rakasviba, kutonhora mumakumbo nemaoko, kushaya musoro, chiziva, kufema, kupera, uye kushaya simba. Kutarisana neDECA, inogona kuenda mukati memwedzi ye3-6.
Catabolic states-Icho chiitiko chinowanikwa nekudzidzisa zvakanyanya apo usingatori mishonga yakakwana zvakanyanya mapuroteni. Paunenge uri munharaunda iyi, unogona kutambura nekushaya hope, kusuruvara uye kurwara pamwe chete uye kuneta zvakanyanya. Kazhinji pane kwete vanhu havanzwisisi kuti zvakanyanya sekushanda kunovabatsira kuvaka mishonga uye vanorasikirwa nesimba rakawanda. Kurasikirwa kunofanira kubhadharwa nekuva nekudya kwakakodzera kunokwana makhabhohydrates uye mapuroteni. Sezvo iri kuwedzera hormone Nandrolone inodzorera muviri wevanabolic yomuviri kuitira kuti agadzirise muviri mushure mekunge aine basa rakaoma. Kana iwe uri fitness fan, deca steroids inofanira kunge yakakura mune rwendo rwako kuti ugadzire mamiriro ehurumende.
Osteoarthritis-Iyo ndiyo nzira yakawanda kwazvo yeArthritis uye inogona kukonzera kuderedza kushamwaridzana kufamba, kuzvimba, uye kurwadziwa. Mafundo ose anokonzerwa neizvi, asi inonyanya kubata musana, zviuno, mabvi, uye maoko. Sezvo zvichiita kuti gumbo rive muzvibatanidza kupfeka, mapfupa anotanga kusungirirana pamwechete zvichiita kuti kuve nekukuvara zvachose pamasangano. Irotilage ndiyo nyuchi dzakapfava dzakapoteredza pfupa dzinopera mubatanidzwa uye dzinoita chishuvo chinotyisa. Mamiriro acho anogona kutungamirira kumapfupa emapfupa, kufungidzira kusuruvara, kurasikirwa kwekugadzikana, kusungirirana pamwe chete, unyoro, uye marwadzo. DECA inobatsira kuderedza marwadzo pamwe chete nekuomesa nekuwedzera protein synthesis.
Kidney failure- Varwere vanorwara nechirwere chepfungwa chisingaperi uye avo vangave vari kuiswa dialysis vanogona kushandisa Nandrolone Decanoate kuti iwedzere musimba mashoma.
Kansa yemazamu- DECAinoshandiswa muhutachiona hwekukura kwekenza yemvere.
Ndiani asingafaniri kushandisa Nandrolone Decanoate?
Mamiriro akanyorwa pasi apa anopesana neDECA. Usati washandisa, tarisa nechiremba wako kana iwe ungave uri kutambura kubva kune mumwe wavo.
Amai anonwisa kana mumwe ari kubudisa mukaka
Kuvharwa kwemazuva akazara bile
Nokukurumidza zviratidzo zvakanyanya zvekushaya mwoyo
Nhamba yakakura ye calcium muropa rako
Prostate gland chirwere
Chirwere chepabonde chinowanikwa mune imwe murwere murume
High blood calcium inokonzerwa nekenza yepamusoro yepabonde
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) muyero
Kutora dhiyo yakakodzera kunokosha zvikuru mumishonga yose yaunogona kutora. Vanhu vazhinji vanoenda zvisina kururama kufunga kuti kutora mishonga yakawanda kunogona kutungamirira kumigumisiro iri nani asi nenzira chaiyo, inopa mukana mukuru wekutambura nemigumisiro yakakomba. Muyero wakaderera hausi nani; hazvizokupei mitezo yako yakanaka uye inongova kuparadza kwemari.
Iwe haudi tani ye steroid ino kuti uone zvibereko zvakanaka; zvinokurudzirwa kuti unongoshandisa 2mg / lb yemuviri wako wakaoma muvhiki imwe neimwe. Unoziva sei muviri wako wakaonda? Iko muviri wako uremu kudarika mafuta. Somuenzaniso, kana iwe uchiyera 200lbs uye une 20% mafuta omuviri, ipapo LBM yako ichava 180 lb. The Ultimate Guide to Stanozolol (Winstrol) yeChipupuriro
180lb x 2 = 360mg yeiri chirwere pavhiki.
Kana iwe usingazivi LBM yako, unogona kufunga kutenga mafuta clipper.
IC deca Durabolin chiitiko chinobva pavhiki yekutanga kusvika kwevhiki yechina. Zvisinei, dzimwe nguva dzimwe nguva inogona kutora nguva yakareba sevhiki masere kuti utange kuona zvigumisiro. Icho chinoreva kuti kuona zvakanyanya Nandrolone Decanoate zvitsva; kutenderera kwako kunofanira kuva kwemavhiki masere.
Kana iwe uri pamusoro Nandrolone Decanoate Dosage, kureva, 400-600 mg pavhiki, saka zvakachengeteka kuti iwe uzvitorere kwemavhiki masere e12-16. Kune rumwe rutivi, kana iwe ukatevedzera 2mg / simba muviri wekutonga mashoma kana pasi peiyo, unogona kutora mavhiki makumi maviri kusvika makumi maviri nematanhatu uye uchiri nani.
kubva DECA kunowedzera rudo kubva kuvadzimai vekuvaka muviri, zvakanaka kuti vaone kuti havadi kutora huwandu hwahwo sezvinoita varume. Zvinoshamisa kuti neNandrolone Decanoate dhijita ye50mg kwevhiki ichavapa miviri inouraya iyo ichava negodo revose.
Apo inoshandiswa sechirwere chemishonga, nandro yeNandrolone Decanoate ndeye 50-100mg kwevhiki ye3-4. Kune avo vanorwara nemisumbu nekurema kuparadza zvirwere, muyero we 100-200mg pavhiki inorayirwa.
Cherechedza kuti kunyange kana Nandrolone Decanoate haisi nhanhatu shoma shoma yekuita yeserogen mazinga kukura nekuenzaniswa nedzimwe steroid, zvinokurudzirwa kuti utore estrogen blocker kuti kuderedza mikana yekuti irege kuitika. Zvimwe zvevhareji zvaungashandisa ndizvo Arimidex 1mg katatu pavhiki kana Aromasin 12.5mg zuva nezuva.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) kufamba
Munguva yekubvongodza, unogona kutora Nandrolone Decanoate kuti uwedzere hukuru hwemasumbu. Iwe unogona nguva dzose kutarisa pairi kana chinangwa chako chiri kutakura pamusana iwoyo. Iko kunotenderera kunogona kutora mavhiki masere gumi nemaviri neDACA muyero we-400mg kwevhiki.
Chikamu chekucheka chinosanganisira kuderedza kuyerwa uye kuedza kuva akaoma sezvinobvira. Izvo zvinowanikwa nguva inotora ndeyemavhiki e12-16. Kubva Deca Durabolin haiti kukonzera kurasikirwa kwemafuta, inogona kushandiswa chete kuchengetedza hutsika hutema hutsika mukati memutambo wekucheka.
Chimwe chezvikamu izvo vashandi vomuviri vanofarira kushandiswa kwekubatanidza Testosterone Cypionate uye Nandrolone Decanoate. Kunyange zvazvo izvi zviviri zvinonzi sevana anabolic steroid, zvigumisiro zvayo zvichakutsvaira tsoka dzako. Kubatsirwa kweNandrolone Decanoate cycle ndeyekuti haisi kungowedzera hutundu asi hunoomesa mitsipa pasina kuwedzera maestrogenic levels.
Chikamu chechipiri chatichakurukura ndechekubatanidzwa kweNandrolone Decanoate, Testosterone Cypionate, uye Dianabol. Kusiyana pakati peiyu uye muenzaniso wekutanga ndeyekuti kuiswa kwaDe Dianabol kunoita kuti chirwere chacho chiwedzere. Kunyange iwe uchizowedzera mamwe masimba, iwe ungangodaro uchatambura zvimwe uyerogenic migumisiro.
Heano muenzaniso wehadhi yepayiti yeTesttosterone, Dianabol uye deca Durabolin.
Vhiki Testosterone Cypionate Dianabol Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin)
1 600mgs / vhiki 50mgs pazuva 400mgs kwevhiki
2 600mgs / vhiki 50mgs pazuva 400mgs kwevhiki
3 600mgs / vhiki 50mgs pazuva 400mgs kwevhiki
4 600mgs / vhiki 50mgs pazuva 400mgs kwevhiki
5 600mgs / vhiki 50mgs pazuva 400mgs kwevhiki
6 600mgs / vhiki 50mgs pazuva 400mgs kwevhiki
7 600mgs / vhiki Off 400mgs kwevhiki
8 600mgs / vhiki Off 400mgs kwevhiki
9 600mgs / vhiki Off 400mgs kwevhiki
10 600mgs / vhiki Off 400mgs kwevhiki
11 600mgs / vhiki Off 400mgs kwevhiki
12 600mgs / vhiki Off 400mgs kwevhiki
Nandrolone Decanoate Post Cycle Therapy
Pamusoro peNandrolone Decanoate kushanda, inopusa muviri wako kuti ufunge kuti hapana chikonzero chekuita testosterone. Nekudaro, inogona kuderedza maitiro e testosterone emuviri nekuputika 70%.
Kana ukangomira kushandisa deca steroid, zvinogona tora muviri wako 2-6 mwedzi isati maitiro e testosterone adzokera kuzvakanaka. Chikonzero chekuendesa-kurapa ndechokuti, panguva ino, muviri wako uchange uine 30% ye testosterone. Kana iwe usina hutachiona hwemashure, hunogona kutungamirira kune zvimwe zvisingadi kuchinja mumuviri sevarume vachiwana vakadzi.
Nenguva isipi pane nzira yekudzivisa izvi kuti zvirege kuitika. Mushure mekunge maitwa newaini yako yeNandrolone Decanoate, kumirira kwemavhiki maviri uchitanga kushandisa 50mg yeClomid kwemavhiki matatu. Kuita izvi kunobatsira zvikuru nokuti zvichaita kuti testosterone yemuviri wako upiwe zvakare.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) migumisiro
Nandrolone Decanoate mugumisiro wenguva inobva vhiki yekutanga kusvika kune yevhiki yechisere. Iyo yakasiyana kubva kune mumwe munhu kune mumwe, asi kana iwe uchida kutsungirira mhinduro, iwe unofanirwa kudya zvakanaka uye kushanda zvimwe.
Kune vanhu vakawanda vakashandisa Deca Durabolin, vakagamuchira 15lbs yemisungo munguva yeChithumba-20 yevhiki.
Nandrolone Decanoate nemigumisiro haisi yakaoma seyimwe inokonzerwa nedzimwe steroid. Zvinokwanisika, asi kana zvikabuda, iwe unogara uchirairwa kuti uone chiremba.
Mafungiro anopinduka- Sezvo zvinogumbura sezvavanenge vachiita, pane nzira dzaunokwanisa kutarisana nayo. Chinhu chimwe chaunogona kuita ndechokuita basa rekuita sekushambira, kumhanya, kufamba kana kunyange kuva nega.
Erectile dysfunction -Inogona kukonzerwa nokushandisa zvizhinji zvakadai zvechirwere ichi. Kana zvichiitika, kuderedza kudya kwako. Kana iri yakaoma, tsvaka rubatso rwechiremba.
Gynecomastia- Mabiko evanhu anogona kugadziriswa nekushandiswa kwekudya kwakakodzera. Uyewo, cherechedza mararamiro asina kunaka kuburikidza nokusadya mafuta akawanda uye kudya zvakagadzirwa. Iwe unogonawo kutenga zvigadzirwa zvemuzamu segynexol inobatsira mumapfupa ako mushumba toning.
Cholesterol maitiro asina kufanana-Nguva dzose tora kudya kwakagadzikana kuderedza cholesterol mazinga mumuviri wako. Chimwe chinhu chaunogona kuita ndechokusanganisira whey protein mune kudya kwako.
Virilization-Ona chiremba kana iwe uchicherechedza kuti urikudzikisa izwi rakadzama kana kumira mumadzimai.
Kubviswa kwe testosterone kubudisa- Mushure mekunge wapedza kushandisa Nandrolone Decanoate, tora Clomid kukurudzira kugadzirwa kwe testosterone.
Mvere dzembudzi kukura-Kana izvi zvikaitika, unogona kubatanidza bvudzi risingadiwi, shandisa bvudzi rinobviswa kamu cream kana kuenda kune electrolysis kuti uibvise muzvikamu zviduku zvemuviri zvawakakura.
Kusuruvara kwebvudzi-Izvi zvinonyanya kuchinja avo vanogona kuva nemhazha. Kuti uite nayo, iwe unogona kushambadza ganda rako nemafuta anokosha anoita kuti vhudzi rive noutano hwakanaka. Unogona kufungawo kutora mavhithamini anodzikisa kusuruvara kwebvudzi.
Acne- Kana ukangotarisa matambudziko anorwadza chiso chako, haafaniri kukumanikidza zvikuru. Zviwani iwe uri pamusoro pekamu kamu cream kuti uubate uye nguva dzose uchengete chiso chako chichena.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) hafu yeupenyu
Nandrolone Decanoate (360-70-3) hafu yeupenyu inenge mazuva matanhatu kusvika masere. Zvisinei, zvinotora mazuva anenge makumi maviri nerimwe chete kuti ibudiswe kubva mumuviri.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) inobatsira
Nandrolone Decanoate (360-70-3) steroid inofanirwa kuenda nokuda kwezvizhinji zvinobatsira zvinounza pabhodhi. Vari;
Kuwedzerwa kwemafupa emasikati- Kubviradecanoate yakaiswa mumusika, chimwe chezvipo zvikuru zvakapiwa ndezvekusimudzirwa kwemapfupa ane hutano nemajopi. Nhengo dzedu nemuviri zvinotarisirwa kupfeka uye kuputika sezvatinokura. Nenguva isipi, kushandiswa kwema deca steroid mabhuku izvi zvinobudirira.
Vatambi uye miviri yezvemuviri inowanzosangana nematambudziko uye akabatana nokuti vanotakura muviri vanorema kupfuura vamwe vanhu apo vatambi vanobatanidzwa mune zvakawanda zvekuita. Vashandi vechikwata vanonyanya kutyisidzika uye vanopinda mukurangwa kwakawanda sezvavanoita mabasa avo ezuva nezuva. Kunyora kuti vose vane masimba akasimba vachakupai musimba wakasimba.
Appetite stimulation- Kana iwe uri muchikamu chekudzora kana uine matambudziko kuchengetedza caloric chikumbaridzo, iwe unofanira kufungidzira kuisa Nandrolone Decanoateto kuwedzera chido chako.
DECA ichakubatsira mune izvi zvichikupa mukana wekuunganidza miviri yakawanda uye makoriki akakwana sezvaunokwanisa. Zvaunofanira kuziva ndezvokuti iwe unofunga kudya zvakawanda zveizvo zvinokuisa huzhinji pauri pasina kuwedzera huwandu hwemafuta mumuviri wako. Kuva nehuwandu hwezvokudya zvine hutano huchasimbisa zvakasimba weightlifting, muscle tsanangudzo, nekuwana simba. Nandrolone saka, ichakubatsira iwe une chido chakakwana chokuita nekudya kwekudya kwakakwana kunogona kukwanisa kudiwa kwe caloric yemigariro yako yemuviri.
Kuwedzera mukugadzirwa kwemasero matsvuku eropa-Kana iwe uri kushamisika kuti kubudiswa kwemamwe masero matsvuku eropa kungakanganisa sei kufamba kwako kwemuviri, ini ndichakuudza kuti sei. Mamwe masero matsvuku eropa anoreva kuti mamwe okisijeni anowanikwa mumisungo yose mumuviri wako. Somugumisiro, izvi zvinowedzera kubereka kwako kwekushanda, saka iwe unokwanisa, saka, kudzidzisa zvishoma uye kuwana zvakawanda.
Kuwedzera kwemisumbu kukura- Kubudirira kweizvi ndechokuti kune kuwedzera kwekushanda kwekuita basa saka iko kunobereka miviri yakakura munguva pfupi. Nokuwedzera IGF-1 kubudisa, hormone inenge yakangofanana neye insulini uye iyo inobatsira zvikuru mukuvaka musimba, deca ichakupa misumbu inoita seyeya Superman.
Low chiropa toxicity- Nandrolone Decanoateposes zvishoma kudarika kwechiropa zvichienzaniswa nezvimwe steroid. Ichokwadi kuti iyo yakaputsika muropa mune imwe nzira inoderedza kusvibiswa kwakaipa kwacho pane chiropa.
Kutendeuka kwaro kune esrogen kunononoka kufananiswa nevakawanda steroid- Kusiyana nevakawanda steroid mumusika, DECA Kunongedza estrogen zvishoma nezvishoma kunoderedza migumisiro yechirwere inouya nayo.
Kuvandudza nguva dzekudzorera- Zvinoreva kuti iwe unogona kuita huwandu hwakawanda hwebasa uye huchakurumidza kudzoka. Izvi ndezvokuti deca steroidincreases nitrogen deposition / protein synthesis. Kamwe iyo inokurudzira collagen synthesis, yose miviri, tendon, uye ganda rinokwanisa kugadzirisa nekudzoka nokukurumidza. Kunyanya kufadza, zvidzidzo zvakaitwa zvinoratidza kuti DECA inogona kuwirirana nekugadzirwa kwe collagen mumuviri. Kukurumidza kupora kunonyanya kukosha kune vadzidzisi vemitambo nevatambi vanoda kusundira miganhu. Kana vachinge vaenda kumitambo yekutambira kana kutora chikamu mukushanda, mishonga inoparadzwa, uye muviri unofanira kushanda pakugadzirisa kusvibiswa kwemasikironi nemasukisi panguva imwe chete zvichiita kuti iwedzere uye yakanyanya musimba kupfuura yaive yakamboita. Mumashoko akajeka, DECA inopa huwandu hwakawanda hweproteiniti iyo iyo inobatsira mumwe kuti awanezve nokukurumidza uye ave nemisumbu yakawanda. Somugumisiro, izvi zvinoita kuti deca steroid inobatsira chaizvo muhupenyu hwehutano hwevanhu vose.
Iwe unoda zvishoma zvishoma DECA utungamiri- Decandiyo chete steroid ine nguva yakasunungurwa-yakasunungurwa. Zvinorevei izvi ndezvokuti paunenge uchizvitora, zvinogona kugara mumutambo wako kwevhiki shomanana. Chikamu chakanaka pamusoro peizvi ndechokuti haufaniri kutora nguva dzose; kutsvaga kushandisa zvinodhaka zuva nezuva!
Strength gains- Kana iwe uchida kuwana zvakawanda, zvinokosha kuti uwane simba rakakwana. Simba rinoitawo kuti simba rako riwedzere uye rinowedzera pamaitiro ako. Unogona; saka, shingairira zvakawanda uye kuita mabasa ako ezuva nezuva musinganeta nokuneta.
Fuller muscles-Iwe uchanakidza mushumo unooneka iwe wauchazoita mushure mekutora Nandrolone Decanoate. Unosanganiswa nekushanda kwakakwana, Nandrolone ichakubatsira kuti uite zvisikwa zvakasimba zvawagara uchida.
Kuvandudza kwehutano hwose- Iyo inosimudzira kushanda uye inosimudzira utsinye apo ichishanda kunze. Nezvose izvi zvikomborero zvakabatana, une chokwadi chokuti iwe uchaonaNandrolone Decanoate inobatsira zvose
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) mhinduro
Wati wakambozvibvunza here kuti avo vane mazamu akazara uye akapoteredza mumagazini, nhepfenyuro yevanhu uye kunyange mumigwagwa inobudirira iyo? Iwe haufaniri kubvunza kuti zvakadini izvo zvakaitika zvakare. Tichakupa iwe wechokwadi Nandrolone Decanoate mhinduro kubva kuvanhu chaivo avo vakambove vakashandisa iyo uye vakava mienzaniso yakanaka uye vashandi vemuviri kuburikidza nokuwana muviri hwave vachichida.
Yuan anoti, 'Ndiri mune zvangu 30 zvino uye ndaifarira kuva nekuwedzera. Zvandinogona kutaura ndezvokuti chigadzirwa ichi chinonyengera. Kubvira pandakaverenga pamusoro payo paIndaneti uye ndakarayira, iyo yakandishandira ini. Hazvina kundiodza mwoyo, uye pamusoro pemitemo yangu yemuviri, ndakaona kufambira mberi kwechokwadi. Ini zvino ndava nani uye ndainzwa zviri nani. Handigoni kuwana zvakakwana zvekuwana zvakanaka mubhokisi rangu nemisungo yemaoko. Ndinokurudzira chero ani anoda kuchinja mumitumbi yavo kuvimba nemigumisiro yeNandrolone Decanoate. '
Cheng anoti "Pamusoro pehupenyu hwangu hukuru hwevanhu vakuru, ndave ndiri chido chakakura chekudzidzisa uye ndinogona kukuudza zvakasimba kuti hapana steroid inopfuura iyi. Ini pachedu ndakaedza vamwe vavo, asi migumisiro iyo iyi inopa inobhadhara mari yese. Mushure mokunge ndakadzika kwemwedzi miviri, simba rangu i20% yakakwirira. Pasinei nekuramba tichidzidziswa uye kudya kwakadaro sezvandakaita munguva yakapfuura, iyi ndiyo nguva bedzi yandakave yakasvinura uye yakawanda muscular. Rimwe bhonasi ine DECA ndiko kuchengetedzwa; sachiremba, ndaifanira kuita nekushingaira kwariri uye ndezvechokwadi, migumisiro yechirwere yakanga iri munyoro. Ndiyo steroid ine simba kwazvo, uye ini ndichaitenga zvakare!
Saleh anoti 'Ndinoshushikana zvikuru kana paine chinhu chipi nechipi chinowanikwa mumuviri wangu kuti mishonga iyi yakashanda mukurasika kwangu kwechido zvakakwana. Ndakanga ndakatsigirwa muupenyu hwangu hwose nekuda kwekurasikirwa kwechido, uye ini ichangobva kusarudza kutendeukira kune steroid iyi uye zvichida ona kana ndikawana imwe nyama. Ndinotenda kuNandrolone Decanoate nokuti mushure mekutevera mirairo yose zvakanaka, yakaguma yabhadhara. Kutendeseka, handina kumbobvira ndave nehuwandu hwandinoyera iye zvino. Chido changu chakakwirira kwazvo, uye ini zvino ndava kunakidzwa neplate yakazara yenyama yakasungwa pasina manzwiro ekukanda. Ndingadai ndisina kumbobudirira izvi pasina kushandisa Durabolin. Ndatenda.'
Yu anoti 'Usarega shoko rokuti' mild steroid 'richikubiridzira iwe kuti ichi chigadzirwa ndechekuparadza mari. Zvakatora basa rangu rekuita muviri kune imwe nzvimbo itsva uye zvakakosha zvakandipa mavheti andaive ndichirota. Ndave ndichienda kumitambo yekurovedza muviri kashanu pavhiki, uye ini handimbofi ndakaneta. Ndinogara ndichinzwa simba rakawanda kuti ndive ne cardio, musimba uye gumbo kudzidzira musi iwoyo. Ndiine utsi hwakanyanya kuderera ndakakwanisa kuona kuti abs yakagadzirwa. Kana uri kutora chero steroid imwe kunze kweDaa Durabolin, saka iwe uri kuita zvose zvisiri izvo.
Ironman anoti 'Ichi ndicho chigadzirwa chisina kuchena chechigunwe. Mushure mekunge ndatenga kuburikidza nekukurudzirwa kwandaishanda pamwe neni, ndaona kuti muviri wangu uye kuyerwa kwandakaita zvakashamisa. Ndine munguva yakapfuura yakazara mafuta mazhinji uye gore rapera ndaive 220lbs ne 30% mafuta mumuviri. Mumazuva makumi mana ekushandisa iyi mishonga uye kutevera kudya kwakanyanya kwecarb, ndatove ndakarashika 17% yemafuta emuviri. Ndanga ndichiri kushandisa kamwe chete kwevhiki, uye ini ndinogona kukuudza kuti migumisiro yacho inogadziriswa. '
Charles anoti 'Ndinonyatsovimba kuti ini ndichakunda mukukwikwidza kwemuviri wangu unozoitwa vhiki inotevera. Mumuviri wangu wakava muscular, uye ini handigoni kumirira kuti dombo riite dhiki rinotevera.
Steven anoti 'kutsungirira kwangu mune zvekurovedza uye simba zvakakwirira mushure memavhiki mana ekushandisa chiitiko ichi chinoshamisa. Hapana chinorova Deca Durabolin kuwana. '
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) inotengeswa
Kana zvasvika pakudzidzisa nekushanda, vanhu vazhinji vangave vasingazivi kuti ndeipi buy Nandrolone Decanoate. Chimwe chinhu chinogona kufungidzira vazhinji ndiko kwavanogona kutenga Nandrolone Decanoate paIndaneti pasina kubatwa. Kushandisa mari pamushonga chete kuti gare gare uone kuti yakanga yakaipa kana yakasviba inogona kuva inonetsa zvikuru. Zvinonzwika sokukanda mari yako mumugwagwa. Nevanhu vazhinji vanotengesa Nandrolone Decanoate yemazuva ano, kune zvikamu zvishoma zvakakodzera zvekuti iwe unogona kuzvitenga nenzira yakachena.
Kana uri munhu iyeye aneta nekutenga mishonga isingashandisi chinangwa kana inofarira kutenga zvigadzirwa Deca Durabolin, ipapo buyaas.com ndiyo nzvimbo inofanira kuva. Kwete chete nzvimbo yedu inoita kuti uve nerunyararo rwepfungwa panguva yekutenga asi iwe unogonawo kuva nechokwadi chokuti haungapindi muchipatare chepatara nekuda kwekutenga musika mutengo DECA.
Isu tinodavirwa neNandrolone Decanoate, uye unhu hwezvigadzirwa zvedu ndiyo yakakwirira pane yaunogona kuwana mumusika. Tine shungu kwazvo panyaya yehutano nekuchengeteka uye hatigoni kuita zviyero pamuviri wako. Uyezve, tine mubayiro weNandrolone Decanoate unonyanya kukosha usingadhura pasina kupa zvibayiro pahutano.
Sezvo isu tichizivikanwa Nandrolone Decanoate mupiro, tinoedza kuve nechokwadi kuti mutengi wese anopinda muwebsite yedu haapfuuri panguva yakaoma achiraira kubva kwatiri. Kutenga kwatinoita kwakananga, uye zvose zvaunofanirwa kuita ndeyokutanga kuGoogle site yedu iyo buyaas.com. Iwe unongotungamirirwa kutungamira peji redu uye tarisa pasi apa uchawana runyora rwezvinhu. Enda kuburikidza nekunyora uye chengeta pane 'zvigadzirwa.' Ichakutungamirira kune urongwa hwezvigadzirwa zvatinopa, asi kana iwe usingakwanise kuona Nandrolone Decanoate pakati pezvakanyorwa pane pekutanga, iwe unogona kuvhara pakutsvaga nekutsvaga chigadzirwa chako chaunoda.
Mushure mokunge mawana uye nekudhonza pairi, iwe unofanira kuzadza fomu shoma nemibvunzo mishoma kuti uone kuti iwe unokodzera. Tichabva tadzokera kwamuri, uye tinotsigira kutengesa. Ita zvikwereti uchishandisa nzira dzakanakisisa uye dzakanakisisa dziripo munharaunda yako uye iyo yakanyorwawo pane yedu yepaiti uye zvino kumirira kuendeswa kwezvinhu zvako munguva shoma nguva inogoneka. Hapana chikonzero chokuzvidya mwoyo pamusoro pekurasikirwa kwepurasi yako, tinoshandisa makambani anotendeseka emakirisi, uye unogona kuva nechokwadi chokuti uchawana chigadzirwa chako nekukurumidza usingatombogadziriswi kana uchienda.
Chinhu chakanakisisa pamusoro pokutenga kubva kwatiri ndechokuti iwe unogona kutenga kubva kune imwe nzvimbo uye uve nechigadzirwa chinopiwa kunze kwekunge uwane mukana wekuwana kubva kunechitoro kusvika kune imwe nzvimbo mukutsvaga. Ichakubatsirawo kukuchengetedza zvishoma zvishoma. Uyewo, munhu wose haafaniri kuziva kuti uri kutora steroids. Iwe chete uye isu tinokwanisa kuziva zviri mukati mechipatara uye chakavanzika mushure momuviri wako wakanaka. Chero bedzi iyo faira yako iri paIndaneti yakabvumira, unogona kuraira kubva kwatiri uye kugamuchira yako Nandrolone Decanoate panguva yekunyaradzwa kwekugara kwako.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) yekuvaka muviri
Kana iwe uchida kuva muumbi wemiti kana wakanga uchifunga kuva mumwe, asi hauzive kuti danho ripi rinotora deca steroid rakakuwana iwe. Uyezve, kana iwe wakanga uri kuvaka muviri asi unonzwa semuviri wako wakarova denga, zvino izvi ndezvawe. Handisi kureva kuti iwe uchagara ipapo uye unotarisira zvigumisiro, asi kana uchitorwa zvakanaka pamwe nekudya kwakanaka uye kudzidzisa kwakakwana, Deca Durabolin achakupa mishonga yakakwana uye kuwedzera chido chako kudarika zvaunotarisira.
Ndeipi kudya kwakanakisisa kunotora panguva yeNandrolone Decanoate Cycle? Kuti uwane huwandu Nandrolone Decanoate inobatsira, iwe unofanirwa kupedza kudya kunobatsira muviri mukuumbwa kwemisungo. Mapuroteni emvura akadai samakaka, mazai, hove, huku, uye nyama zvichabatsira muviri muhutano hwemashuga emisumbu. Iwe unogonawo kutora zvokudya zvakagadzirwa mumafuta ezvokudya uye cholesterol, semuenzaniso, mafuta ehove anobatsira kusimbisa kushandiswa kwemashuga. Fiber-rich rich-carbohydrate yakawanda semafuta akazara, branh, makomkete, uye oats imwe sarudzo huru nokuti inobatsira mukudya uye inokubatsira kuti ugare wakashanda.
Uyezve, mvura ichaita sechirwere mukutakura kwezvimiti kusvika kumasero emasumbu. Iwe haufaniri kunwa rwizi; iyo yakareba mashekita gumi emvura yakakwana. Kamwe iwe unosanganisira ichi chikafu mukati mako Nandrolone Decanoate bodybuilding, unovimbiswa kuti unotakura pamapirundi akachena uye asina kusvibiswa. Chikonzero cheizvi ndechokuti chikafu chinonyanya kukosha pakusika mamiriro akanaka anowanikwa muhomwe huru.
Tsvaga kubhadharira kwakakodzera kunokodzera zvakakwana muviri wako wekufamba nekushandiswa kwe deca steroid. Paunenge uchibvongodza, iwe unofanirwa kunge uchitora chikamu mukurovedza kunowedzera simba. Mienzaniso yekushanda uku ndeyekuputika, kufa, maitiro, bhenchi, uye squats. Iwe unogona kugadzira nguva yaunogona kutevera nguva dzose kuenda kumitambo yekurovedza kana kusarudza kushanda pamba. Kana iwe uchinzwa kuti izvi zvakanyanya zvakaoma kwauri, kuwana mukoti wekuita muviri kunogona kubatsira zvakawanda. Haasi iye chete anokudzidzisai nezvokudya zvinovaka muviri uye maitiro asiwo achakubatsira kuti uite zvinangwa zvinogona kuwanikwa.
Kuti uchinakire uye uwane muviri wakafanana newaunofarira muviri wako, unofungidzire kutora ichi chiitiko-kukurudzira zvinodhaka. Iwe hauzenge uchinzwa wakaneta zvikuru mushure mekudzidzisa zvidzidzo; iwe unogona kushanda zuva rose kana uchida! Raira Nandrolone Decanoate yako nhasi uye gadzira muviri wako kuti unoda sei kuti iite saiye.
Mhoro shamwari, Tenda nekunakidza kwako. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve maitiro ekuraira zvigadzirwa zvedu, tapota taura nesu kuti email kune: [Email akadzivirira] Kutenda kwakawanda uye Zvakanakisa nezvako,
Me llamo José Luis tengo 47 años peso 85 kg soy de tecamachalco puebla, nunca he wateido esteroides, hago mucho ejercicio quiciera wateir algún esteroide que me recomiendan
Buenas. Soy principiane me gustaria saber toda la informationación y donde comprarlo.
Diego Felipe gualdron clearos
Quiero comprar el gitoto y saber como se suministra
Isu tiri kungopihwa chete steroid mbanje poda, kwete nyanzvi pazvinhu zvakapera. Kana iwe uchida mbanje poda, ndapota taura nesu ku: [Email akadzivirira] Kutenda kuzhinji! ..
meechisa comprar el femto deca durabolin